Ny Horoscope ho an'ny Mpamorona sary - Hehy | Famoronana an-tserasera
Ny vazivazy mpiara-miasa ho an'ny mpamorona sary dia namorona andiam-panoharana mahatalanjona izay manandrana maneho amin'ny fomba tonga lafatra ireo karazana mpamorona izay misy raha maka izany ho toy ny angano sy taloha tahaka ny tonon'andro mandritra ny androm-piainana. Avy amin'ireo toetra nifandraika tamin'ny famantarana ny zodiac, dia namolavola fanehoana mahaliana an'ny mpamorona izy ireo, izay farafaharatsiny, ho ahy, tanteraka ilay profil.
Mba hamaritana ny toetra amam-panahin'ny tsirairay, ny fanontaniana dia voavaly ho tsotra (ary miaraka amin'izay dia manahirana tokoa) eo amin'ny sehatra misy antsika toy ny: Firy ny mpamorona ilainy mba hanaovana ireo fanovana ilaina amin'ny famolavolana?
Aries: Iray ihany, fa fisie maro no ilaina.
Taurus: Tsia, ny Designer Taurus dia tsy tia manova zavatra.
Gemini: Roa, fa haharitra ny faran'ny herinandro, rehefa vita ny fanadiovany ny cubes, hiresahana momba ny teôria sy ny loko semiotika ho vonona izy ireo hanao ny fanovana.
Kansera: iray ihany, fa mila mandany telo taona amin'ny fitsaboana ianao hiatrehana ny fizotrany.
Leo: Tsy manao fanovana izy, miova ho azy ny endrika.
Virgo: Ny iray handrehitra ny solosaina, ny iray hanoritsoritra sary, ny iray hafa hanapa-kevitra hoe inona ny hevitra tsara indrindra, folo hanamboarana endrika an-jatony raha ny iray kosa no manondro ilay voalaza.
Libra: Tsy fantatra marina, miankina.
Scorpio: Tsy fahatokisana, tsy mamaly.
Capricorn: Tsy misy.
Aquarium: An-jatony ny mpamorona aquarium hiseho mifaninana hijery hoe iza no ho tokana hanao ny endrika tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny Horoscope ho an'ny mpamorona sary - Hehy
Roberto Juarez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Roberto Juarez